ဂါ 07 Jan 2020, 16:10 ညနေ
ဒါရာဇဝတ်မှုမဟုတ်ဘူးလား ? ဂျပန်ညဥ့်ယဉ်ကျေးမှု !!!!
အာကာသသို့ ကိုယ်ပိုင်စွမ်းအားဖြင့် သွားမည့်သူ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးကို မပြောသင့်တာပြောခဲ့တဲ့ ဦးလေးကြီး
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ သတင်းအမှားကြောင့် ဘာမသိညာမသိ ဝေဖန်ခံလိုက်ရတဲ့နာမည်ကြီး YouTuber!!
ဧကရာဇ်မိဖုရားကြီး Kunaichō ဆေးရုံသို့ ခွဲစိတ်မှုအပြီး တိုးတက်မှုအတည်ပြုချက်လာယူ !!!
ဖောက်ပြန်တဲ့အိမ်ထောင်ဖက်ကို ဂျပန်လူမျိုးဆန်စွာ လက်စားချေနည်း !!!!
ဦးတည်ရာမပါတဲ့ လေယာဉ်ခရီးစဉ် ရေပန်းစားလျက်ရှိ !!!!
ဂျပန့်အလှဆုံးရဲတိုက်မှာနေထိုင်တဲ့ တစ္ဆေ !!!
ကျိုတိုမြို့သို့ခရီးသွားနေသည်။ လည်ပတ်သင့်တဲ့နေရာ ၁၀ နေရာ !!!
ဂျပန်ရဲ့ အမှောင်လောက၊ အထက်တန်းကျောင်းသူမလေး ပြန်ပေးဆွဲခံရခြင်း အမှုကိစ္စ !!!!
တကယ့်ကိုထိတွေ့ချင်ပေမဲ့ တံခါးပေါက်မှန်ကနေတဆင့် အရိုအသေပြုရတဲ့ အသက်ကြီးသူများနေ့..!!!
Bản tiếng Việt - ភាសាខ្មែរ - မြန်မာဘာသာ - Русская версия.